Mourinho: Sanchez garoon walba oo uu tago waa looga oorin doonaa maadama uu mushaarka ugu badan Premier League-ga qaato – Gool FM
Mourinho: Sanchez garoon walba oo uu tago waa looga oorin doonaa maadama uu mushaarka ugu badan Premier League-ga qaato
Kaafi January 31, 2018
(Manchester) 31 Jan 2018. Tababaraha Manchester United Jose Mourinho waxa uu sheegay in Alexis Sanchez ay ku oorin doonaan taageereyaasha kooxaha ka soo horjeeda sababo la xiriira mushaarka qaaliga ah ee uu qaato.
Sanchez waxa uu bishan Manchester United uga soo biiray Arsenal heshiis docda kale u weydaairiyey Henrikh Mkhitaryan.
29 jirka waxa uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay United FA Cup-ka toddobaadkii hore waxaana la filayaa in uu qeyb ka ahaa safka kowaad ee ciyaarta caawa Premier League-ga ay la leeyihiin Tottenham Hotspur.
Sanchez waxaa la filayaa in ay ku ooriyaan jamaahiirta Tottenham, arin uu Mourinho u sababeeyey mushaarka qaaliga ah ee uu qaato ee marka canshuurta laga reebo noqonaya £350,000.
“Soo dhaweynta ceynkaas ah meel walba wuu kala kulmi doonaa. Wax micno leh ma aha marka la eego xifaaltankii hore uga dhexeeyey Arsenal iyo Spurs. Taas oo kale meel walba wuu kala kulmi doonaa,” ayuu Mourinho u sheegay wariyeyaasha.
“Ma aqaan in ay run tahay ama aysan ahayn – sheekada ah in uu qaato mushaarka ugu sarreeya Premier League-ga. In koox weyn aad koox kale oo weyn ku bedelato, waa xaalad soo jiidaneysa taas – laakiin ma qabo in ay lur ku hayso.”
Roma oo xaqiijisay in Edin Dzeko ka tegi doonin kooxda
RASMI: Chelsea oo dhamaystirtay saxiixa Olivier Giroud